सानै उमेरमा अभिनेत्री जान्हवी कपूरले किनिन् आफ्नै घर, पैसा कसरी कमियो भन्ने खुल्यो ! – Khabaarpati
January 8, 2021 goodmamLeaveaComment on सानै उमेरमा अभिनेत्री जान्हवी कपूरले किनिन् आफ्नै घर, पैसा कसरी कमियो भन्ने खुल्यो !
काठमाडौं । बलिउडमा प्रवेश गरेर सफलता पाएकी अभिनेत्री जान्हवी कपूर मुम्बईको जुहु क्षेत्रमा किनिएको आफ्नो नयाँ घरका कारण चर्चामा छिन् । भनिन्छ कि उनी अब अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, अनिल कपूर र परेश रावल जस्ता वरिष्ठ कलाकारहरूको छिमेकी भएकी छिन् । तर, ‘अमर उजाला’ को ग्राउन्ड रिपोर्टले तपाईंको लागि यसका बारे केही रोचक कुरा बाहिर ल्याएको छ ।
पहिलो, जान्हवीले भवनको तीन तला होइन ताकी एक तला किनेकी छिन् । दोस्रो, उनी यस भवनमा उनको नजिकका सह–कलाकारहरूमध्ये एकलाई पछ्याउन आएकी छिन्, जसले ६ महिना अघि यस भवनमा फ्ल्याट किनेका थिए । तपाईंले यहाँ देख्नु भएको तस्वीर अरैया नामको भवनको हो । जान्हवीले जुहूमा यस भवनको तीनवटा फ्ल्याट किनेकी छिन् भनेर चर्चा गरिएको थियो ।
जुन मुम्बईको पोष्ट क्षेत्रमा रहेको छ । केही समाचारहरुमा यो पनि भनिएको छ कि जान्हवीले यस भवनको १४औं, १५औं र १६औं तलामा तीन वटा फ्ल्याट किनेको कुरा बाहिर आएको थियो । जबकि यो भवन केवल १४ तलाको मात्रै छ । जानकारी अनुसार जान्हवीले ६२ करोड भन्दा धेरै रकममा तीनवटा फ्ल्याट किनेको बताइएके छ ।
जान्हवीको यस भवनको वरिपरि शत्रुघ्न सिन्हा, परेश रावल, अनिल कपूर, अमिताभ बच्चन जस्ता कलाकारहरूको घरहरू छन्, तर यी सबै अर्को भवन वा बंगलामा छन् । जान्हवीले एक कलाकारको साथ एक रोचक फिल्मको शूटिङ्ग गरेकी छन् जसको वास्तविकता लकडाउन हुनु भन्दा पहिले छिमेकी बन्न पुगेको थियो । अभिनेता जसको पछाडि जान्हवी यस भवनमा आएकी छिन् उनको नाम राजकुमार राव हो ।
राजकुमारले एउटै भवनमा दुईवटा फ्ल्याट किनेका छन् । ११ औं तलामा खरिद गरिएका यी दुवै फ्ल्याटहरू ६ महिना भन्दा बढी भैसकेको छ । राजकुमारले यस घरभित्री काम गरिरहेको कुरा बाहिर आएको छ । यो काम सम्पन्न हुन लागेको बताइएको छ । यो धेरै सम्भव छ कि राजकुमारको नयाँ घरमा बस्न आउँन सक्ने बताइएको छ ।
जान्हवी कपूरको घरमा पनि काम सुरु भएको छ र तिनीहरूलाई आउन र नयाँ घरमा बस्नको लागि केही महिना लाग्ने जनाइएको छ । जान्हवी कपूर र राजकुमार राव दुबै कोलोना लकडाउनभन्दा ठीक अगाडि ‘रुही अफजाना’ फिल्म पूरा गरिसकेका छन् । यस फिल्मको पोष्ट निर्माण हाल चलिरहेको छ ।
निर्माताहरूले अहिले सम्म फिल्म रिलीजको घोषणा गरेका छैनन् । यस फिल्मको नाम सुरू भएदेखि तीन पटक परिवर्तन भएको छ । ‘रुह अफजा’ को नामबाट सुरु भएको फिल्म पहिलो ‘रुही अफजा’ र त्यसपछि ‘रुही अफजाना’ मा परिवर्तन गरिएको थियो ।
यो फिल्म दिनेश विजानले निर्माण गरेका हुन् भने निर्देशक हार्दिक मेहता हुन् । जान्हवी कपूरले फिल्मबाट आएको रकम नै खर्च गरेको बुझिएको छ ।
सडक दुर्घटनामा कम्तीमा २२ जनाको मृत्यु